Yen In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka (2022)
Yen In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Yen In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka taariikhda tan 1992 ilaa 2022. Lacagta shaxda diinta Yen In Oo shilin Soomaali (2022).
Waxaan haynaa taariikh ku saabsan heerka sarrifka lacagaha ee sanad kasta. Diiwanka dhammaan qiimayaasha sarrifka ee sanadka oo dhan khadka tooska ah. Yen taariikhda taariikh kasta ha noqotee. Xogta xorta ah ee Yen to Oo shilin Soomaali sarrifka lacagaha laga bilaabo 1992 ilaa 2022 qadka tooska ah hada. Qiimaha sarrifka ee la soo dhaafay, sanad kasta.
Shaxanka taariikhda isweydaarsiga qiimaha Yen to Oo shilin Soomaali, waxaad arki kartaa taariikhda dheer ee isbeddelka qiimaha lacagta. Taariikhda Yen ee tusaha ku jira boggayaga internetka. Garaafka taariikhda Yen to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992 oo laga soo xiganayo sanad walba. Waxaad ogaan kartaa sida saxda ah Qiimaha Yen qiimaha shaxda haddii aad kor u dhaaftay taariikhda la xushay. Si aad u ogaato heerka saxda ah ee sanadkii la soo dhaafay, ku kor maro garaafka taariikhda Yen to Oo shilin Soomaali.
Beddelaan Yen In Oo shilin Soomaali Yen In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Yen In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex
July 2022 4.024340
June 2022 4.417318
May 2022 4.436887
April 2022 4.885338
March 2022 4.524625
February 2022 4.993676
January 2022 5.037152
Taariikhda Isweydaarsiga qiimaha Yen to Oo shilin Soomaali ayaa miiska jooga sanad walba. Jadwal internet ah oo ka hadlaya taariikhda xigashooyinka Yen / Oo shilin Soomaali lacagta sanad walbo ilaa 1992 waxaa lagu sameeyay boggan. Taariikhda sarrifka shaxdan: Yen to Oo shilin Soomaali waxaa la helaa sanad walba: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Taariikhda sarrifka ee sanad walba bilo ayaa la heli karaa adoo gujinaya isku xirka sanadka ee miiska taariikhda lacagta. Taariikhda Yen sicirka sarrifka ee sanadka la xusho ayaa bilaash ah haddii aad gujiso xiriirinta sanadka ee miiska taariikhda xigashada.
Qiyaas inta lacagtu isu beddelay 10, 20 ama 30 sano. Eeg jaantuska xigashooyinka waqti dheer. Kicitaanka iyo dhicitaanka Yen to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992. Dhaqdhaqaaqa muddada-dheer ee Yen to Oo shilin Soomaali toban sano ka badan ayay suurtagal tahay in lagu qiyaaso boggan. Xulo lacag ka duwan Oo shilin Soomaali si loo ogaado taariikhda Yen oo kaash ah lacag kale.
Xullo lacag halka a Yen si aad u ogaato taariikhda heerka sarrifka ay ku gashay Oo shilin Soomaali. Taariikh bilaash ah oo ku saabsan sheegashada dhammaan lacagaha 30kii sano ee la soo dhaafay qeybtan ka ah websaydhka moneyratestoday.com Yen ilaa Oo shilin Soomaali 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Guji sanadka shaxda si aad u ogaato taariikhda Yen ilaa Oo shilin Soomaali.